आजदेखि देशैभर काेराेनाविरूद्धकाे खाेप लगाइँदै, क-कसले पाउँछन् खोप ? « News24 : Premium News Channel
आजदेखि देशैभर काेराेनाविरूद्धकाे खाेप लगाइँदै, क-कसले पाउँछन् खोप ?
काठमाडौं, १४ माघ । सरकारले आज (बुधबार)देखि काेरोनाभाइरसविरुद्धको ‘कोभिशिल्ड’ खोप अभियान शुभारम्भ गर्दै छ । त्यसका लागि भारतले अनुदानस्वरूप उपलब्ध गराएको ४ लाख ५० हजार खोप देशका सातै प्रदेशमा पुर्‍याइसकिएको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बुधबार बिहान १० बजे भर्चुअलमार्फत खाेपकाे शुभारम्भ गर्नुहुने छ । खोपको शुभारम्भ समारोहमा सातै प्रदेशमा रहेका ६२ अस्पताल र १२० भन्दा बढी खोप केन्द्रबाट सूचीकृत व्यक्तिलाई एकै साथ खोप दिइने छ ।
नेपालमा पहिलो ‘कोभिशिल्ड’ खोप काठमाडौंको टेकुस्थित शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालका निर्देशक डा. सागर राजभण्डारीले लगाउँदै हुनुहुन्छ । डा‍. शुक्रराज अस्पतालका २६३ जना डाक्टर/स्वास्थ्यकर्मीले खोप लगाउने बताइएकाे छ ।
कहाँ- कहाँ लगाइन्छ खाेप ?
‘कोभिशिल्ड’ खोप काठमाडौँ उपत्यकामा १७ खोपकेन्द्रबाट दिइने भएको छ । स्वास्थ्य सेवा विभाग, बालस्वास्थ्य तथा खोप शाखाका निर्देशक डा झलक शर्मा गौतमका अनुसार काठमाडौँमा १२, ललितपुरमा तीन र भक्तपुरमा दुई अस्पतालमा खोप केन्द्र रहने छन् ।
काठमाडौँमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल, वीर अस्पताल, शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल, काठमाडौंँ मेडिकल कलेज जोरपाटी, परोपकार प्रसूति तथा स्त्री रोग अस्पताल, शहीद धर्मभक्त अङ्ग प्रत्यारोपण केन्द्र, सशस्त्र प्रहरी बलम्बु अस्पताल, शहीद गङ्गालाल अस्पताललगायत छन् । ललितपुरको पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, किष्ट मेडिकल कलेज र आनन्द वन अस्पतालमा खोप केन्द्र रहने छन् । यस्तै भक्तपुरमा भक्तपुर अस्पताल र कोरियामैत्री अस्पताल रहने छन् ।
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले पहिलो चरणको खोप अभियान शुरु गरेको १० दिनभित्र अभियान सम्पन्न गर्ने छ । सो चरणमा चार लाख ३० हजारलाई खोप प्रदान गरिने छ ।
क-कसले पाउँछन् ?
४० वर्षमाथिका नागरिकका पिसाब जाँच सरकारले गर्ने
काठमाडौं । ४० वर्ष कट्नुभएको छ ? उसो भए ढुक्क हुनुस्, सरकारले ४० वर्षमाथिका सबै